सीएनसी लेथ मेशीन बिक्रीको लागि, धातु काट्ने, चीन निर्माता र आपूर्तिकर्ता
तिमि यहाँ छौ: घर1 / सीएनसी लेथ मेशीन बिक्रीको लागि, धातु काट्ने, चीन निर्माता र आपूर्तिकर्ता ...
धातु कटाईको लागि उच्च प्रेसिजन लाठी मेशीन
सीएनसी लेथ मेशीन राम्रो विकल्प हो यदि तपाईंसँग टुक्राहरू छन् जुन द्रुत-उत्पादन गर्न आवश्यक छ। यसले स्वचालित रूपमा वर्कपीस रोटेशन र उपकरण आन्दोलनलाई NUMERICAL नियन्त्रण प्रणाली मार्फत नियन्त्रण गर्न सक्छ, मैन्युअल्ली नियन्त्रण गर्न आवश्यक छैन। उदाहरण को लागी, तपाईलाई गोल आकारमा फरक आकारका धेरै रि severalहरू आवश्यक छन्, खराद प्रणाली प्रणालीमा सम्बन्धित आकार र विस्थापन कोड इनपुट गरेर स्वचालित रूपमा रिंगहरू प्रशोधन गर्न सक्दछ। प्रक्रिया समाप्त भएपछि तपाईले नयाँ वर्कपीस म्यानुअल तरीकाले बदल्न सक्नुहुन्छ, वा तपाई आफैंलाई फिडि man म्यानिपुलेटर (रोबोट) द्वारा पनि कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ, प्रशोधन दक्षतामा ठूलो सुधार ल्याउनुहुन्छ।
CNC खराद को छनौट workpiece को आकार र प्रसंस्करण को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, स्वचालन आवश्यकता को डिग्री अनुसार एक हेरफेर र स्वचालित चिप हटाउने उपकरण संग पनि कन्फिगर गर्न सकिन्छ। हामीसँग सिन्फासँग सीएनसी लेथ मेशीन, उच्च शुद्धता, राम्रो स्थिरता, र विविधता अधिक पूर्ण छ, तपाईंको एक स्टप खरीदको लागि सुविधाजनक।
सीएनसी लेथ मेशीन LTK6136
मेशिन व्यास: 300०० / 360 360० मिमी
workpiece लम्बाई: 500/750 / 1000mm
सीएनसी लेथ मेशीन LTK6140
मेशिन व्यास: mm०० मिमी
5050० / १००० / १00०० / २००० / 000००० मिमी
सीएनसी लेथ मेशीन LTK6150
सीएनसी लेथ मेशीन LTK6180
सीएनसी के हो?खराद मेसिन?
CNC खराद CNC प्रोग्रामिंग द्वारा नियन्त्रित एक अत्यधिक स्वचालित धातु काट्ने मेसिन हो। व्यापक रूपमा प्रयोग, गोलाकार, प्वाल, र अन्त्य गर्न सकिन्छ।
प्रयोगको सुरूमा हामीले वर्कपीस प्रोसेसिंग प्रोग्राम, क्ल्याम्पि work वर्कपीस, सुधार, उपकरण सेटिंग सेटअप गर्नुपर्दछ। म्यानुअल वृद्धिशील आन्दोलन, निरन्तर आन्दोलन वा म्यानुअल डिस्क सार्ने खराद खण्डको उपयोग। कार्यक्रमको सुरूवात गर्न र उपकरणको सन्दर्भसँग पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस्। समन्वय फिड सुरू गर्नुहोस् र मसिनि continue जारी राख्नुहोस्। फिड रेट स्विच प्रक्रियाको क्रममा फिड दर समायोजन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रशोधनको बेला, फिडहोल्ड बटन थिच्न सकिन्छ, फिड आवागमन रोक्न सकिन्छ, र प्रशोधन सर्तहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ वा म्यानुअल्ली मापन गर्न सकिन्छ। CYCLESTART बटन फेरि थिच्नुहोस् प्रकृया पुनः सुरु गर्न। कार्यक्रम सही छ भनेर सुनिश्चित गर्न, यो प्रक्रिया पछि फेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ।
CNC खराद मशीनिंग सटीकता उच्च छ, स्वचालित रूपमा उपकरण परिवर्तन गर्न सक्दछ, बहुविध प्रक्रियाहरूको निरन्तर समाप्ति। यो धातु काट्ने मा एक अपरिहार्य उपकरण हो। यो ब्याच प्रेसिजन र जटिल धातु काट्नको लागि एक आवश्यक उपकरण हो।
सीएनसी प्रणाली नियन्त्रण द्वारा सर्वो मोटर रोटेसन, स्वचालित फिड, ब्याच प्रक्रियाको लागि उपयुक्त।
झुकाएको ओछ्यान, सुविधाजनक चिप, एन्टि-झुकाउने र एन्टि-मोड्ने क्षमता अझ मजबूत छ। अन्तरिक्षको प्रभावकारी प्रयोगले मेशीनको प्लेन क्षेत्रलाई धेरै कम गर्दछ।
ठूलो स्पिन्डल होल सीएनसी पाइप थ्रेडि lat लेथले स्वचालित रूपमा र प्रभावकारी ढ all्गले सबै प्रकारको सीधा पाइप र टेपर्ड पाइप थ्रेडहरूको कटिंग पूर्ण गर्न सक्दछ।
सी अक्ष र पावर हेड थप्नुहोस्, मिलिंग कम्पाउन्ड प्रकार्य साथ, स्वचालनको उच्च डिग्री।
का प्रकारCNCखराद मेसिन?
स्पिन्डलको दिशा अनुसार, मा विभाजन गर्न सकिन्छ: CNC ठाडो खराद र CNC क्षैतिज खराद
गाईड मार्ग प्रकारका अनुसार यसमा विभाजन गर्न सकिन्छ: CNC लाइन मार्ग मार्ग खराद र कठोर रेल खराद।
ओछ्यानको झुकाव अनुसार, यसमा विभाजन गर्न सकिन्छ: सीएनसी फ्ल्याट बेड लेथ र सीएनसी स्लन्टि bed बेड लेथ।
प्रसंस्करण प्रक्रिया अनुसार विभाजन गरिएको छ: सामान्य CNC खराद, CNC पाइप थ्रेड खराद र मोडि machine मेसिन
को अनुप्रयोगCNCखराद मेसिन?
सीएनसी लेथले सिलिन्डर, अटोमोबाइल लिनेज शाफ्ट, बेयरिंग र ह्विल हबको उत्पादन र निर्माणमा अपूरणीय भूमिका खेल्छ। यो रेल केन्द्र र तेल पेट्रोलियम उद्योग, रासायनिक पाइपलाइन र भूवैज्ञानिक अन्वेषण सम्बन्धित पेट्रोलियम उद्योगको मर्मतमा पनि प्रयोग गरीन्छ। उपकरण निर्माणमा, हार्डवेयर, चिकित्सा उपकरण, शिपबिल्डिंग र अन्य उद्योगहरूले पनि सीएनसी खराद प्रयोग गर्नु पर्छ।